धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ जनाको आवेदन (सूचीसहित)- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्ष पद सिफारिस समितिले दोस्रो पटक आह्वान गरेको सूचनापछि १५ जनाको आवेदन परेको हो । अघिल्लो पटक जारी सूचनामा १२ जनाको आवेदन परेको थियो ।
पहिलो सिफारिस समितिको गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि सरकारले दोस्रो पटक समिति गठन गरेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सेबोन अध्यक्ष पदका लागि १५ दिन अघि सूचना जारी गरेको थियो । सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र वित्त सदस्यमा जीवनाथ धिताल रहेका छन् । आवेदनका लागि आज अन्तिम दिन थियो । परेका आवेदनमध्येबाट समितिले तीन जना छनोट गर्ने छ । छनोटमा परेकामध्येबाट सरकारले एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
सेबोनका पूर्व अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाको बर्खास्तपछि उक्त पद खाली छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारमा संलग्न भएको भेटिएपछि ढुङ्गानालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । धितोपत्र ऐन २०६३ मा धितोपत्र अध्यक्षका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
सेबोनमा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनेहरूको सूची :
१. डा‍. गोपालप्रसाद भट्ट
१२.डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ
प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १७:५७
विद्यालय जान थाले सैनामैनाका आमाहरू
बुटवल — विभिन्न कारणले बाल्यकालमा विद्यालय जान नपाएका र बिचमै पढाइ छाडेका महिलाको शिक्षा पूरा गराउनका लागि विद्यालय सञ्चालन भएको छ । आमाहरूको काँधमा घर व्यवहार चलाउने जिम्मेवारी छ । तैपनि समय निकालेर पढ्न गएका छन् ।
हरिकला घर्ती मगरले बाल्यकालमा पढ्न पाइनन् । ९ वर्षकै उमेरमा बिहे भयो । त्यसपछि घरधन्दा र छोराछोरी हुर्काउँदैमा दिन बिते । अहिले छोराछोरी हुर्किए । घरधन्दा कम हुँदै गयो । ५१ वर्षे टिकामाया दिउँसो फुर्सद निकालेर पढ्न जान थालेकी छन् । ‘असाध्यै पढ्न मन थियो,’ उनले भनिन्,‘ त्यसैले पोहोर साल प्रौढ कक्षाबाट सावा अक्षर सिकें । अहिले कक्षा ४ मा भर्ना भएकी छु ।’
हरिकला मेहनती छिन् । नियमित गृहकार्य गर्छिन् । आवाज निकालेर अंक र गुणन कण्ठस्थ गर्छिन् । ‘पढाइमा मात्रै ध्यान दिन पाइँदैन,’ हरिकलाले सुनाइन्, ‘भान्सामा काम गर्दै‚ पढ्दै गर्नुपर्छ । नातिनातिना हेर्दै‚ लेख्दै गर्नुपर्छु ।’ मोबाइल चलाउने र आफ्नो नाम लेख्ने रहरले पढ्न गएकी टिकामायाको अब कक्षा १२ सम्म पढ्ने धोको छ । गाउँका साना विद्यार्थीजस्तै नेपाली र अंग्रेजी फरर पढ्ने रहर छ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-६ पटनामा महिला विद्यालय सञ्चालन भएको छ । विभिन्न कारणले बाल्यकालमा विद्यालय जान नपाएका र बीचमै पढाइ छाडेका महिलाको विद्यालय शिक्षा पूरा गराउन विद्यालय खोलिएको हो । सैनामैना नगरपालिकाले गोरखनाथ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई यस वर्षदेखि आधारभूत तहसम्म पढाइ हुने महिला विद्यालयमा रुपान्तरण गरेको हो । महिलाहरू कक्षा उत्तीर्ण हुँदै नयाँ कक्षामा जाँदा विद्यालयलाई मावि तहसम्म पुर्‍याइने लक्ष्य छ । गाउँमै महिला विद्यालय खुलेपछि पढ्ने रहर भएका धेरै आमाहरू विद्यालय जान पाएका छन् ।
त्यसमध्येकी हुन्, ४५ वर्षीया लालुमाया राना । सावाँ अक्षरसमेत नजानेकी उनी गतवर्ष साक्षरता कक्षामा भर्ना भएकी थिइन् । अहिले उनी कक्षा ४ मा पढ्दैछिन् । नेपाली खरर पढ्छिन् । मोबाइल चलाउँछिन् । दिउँसो विद्यालयमा पढ्छिन् । साँझ-बिहान घरधन्दा गर्दै गृहकार्य सक्छिन् । उनको एसईईसम्म पढ्ने उनको धोको छ । ‘समयले बाल्यकालमा पढ्न दिएन । अहिले भए पनि रहर पूरा गर्दैछु,’ भीमाले भनिन्, ‘लेखपढ नजान्दा धेरै पटक ठक्कर खाएँ । पैसा नचिन्दा धेरै पटक ठगिएँ । साथीसंगी र आफन्तबाट अपमानित पनि भएँ । अब कहिल्यै त्यस्तो भोग्नुपर्ने छैन ।’ गुल्मीमा जन्मेकी लालुमायाले जान्ने भएदेखि घाँसदाउरा गरिन् । दाजुभाइलाई पढ्न पठाउँदा उनलाई पठाइएन । ‘साह्रै रहर थियो पढ्ने । अहिले पूरा भयो,’ लालुमायाले सुनाइन् ।
तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर ।
मेची-महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले विद्यालय व्यवस्थापन गरेको छ । उसले नै नगरपालिकाभित्र पढ्न नपाएका महिलाको सूची तयार पार्ने र विद्यालय आउन परामर्श गरेको छ । उनीहरूमध्ये धेरै साक्षर कक्षाबाट अक्षर चिनेका महिला हुन् । कोही बिचमै पढाइ छाड्ने महिला पनि छन् । अर्घाखाँचीकी मानकुमारी थापा कखरा पढ्दै थिइन् । बिहे भयो । घरधन्दा र छोराछोरी हुर्काउने कामले पढेका कुरा पनि बिर्सिंदै गइन् । अहिले मोबाइल र फेसबुकको जमाना आयो । उनलाई पढ्ने रहर लाग्यो । तिनै ४७ वर्षीया मानकुमारी थापा अहिले कक्षा ४ मा पढ्दैछिन् । उनले अहिले स-साना अंग्रेजी वाक्य पढ्न र मोबाइल चलाउन सिकेकी छन् । उनको एसईई‍सम्म पढ्ने मायाको धोको छ । ‘पढे संसार चिनिँदोरहेछ । पढेर जागिर खाने उमेर गयो तर पनि एसईईसम्म गर्नेछु,’ मानकुमारीले भनिन् ।
विद्यालयमा अहिले २५ जना महिला अध्ययनरत छन् । धेरैजसो आमा बनेका विद्यार्थी छन् । कोही हजुरआमा बनेका छन् । आमाहरूको काँधमा घरव्यवहार चलाउने जिम्मेवारी छ । तैपनि जसोतसो समय निकालेर पढ्न गएका छन् । नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले घरेलु मजदुर, श्रमिकलगायत पढ्न नपाएका किशोरीहरूलाई समेत विद्यालय ल्याउन सर्वेक्षण थालेको बताए । ‘सबै महिलालाई शिक्षा र रोजगारीको अवसर दिने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पढाइ पूरा गरेका महिलालाई जागिर वा व्यवसायमा लाग्न पनि सघाउनेछौं ।’
विद्यालयमा बिहान ११ देखि दिउसो ३ बजेसम्म पढाइ हुन्छ । अन्य दिन विद्यालयको कोर्स पढाइन्छ । हप्ताको एक दिन शुक्रबार व्यवहारिक शिक्षा पढाइन्छ । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, मानवअधिकार लगायत विषय रहेको केन्द्रकी अध्यक्ष लता खड्काले बताइन् । ‘महिलाहरूको अधुरो शिक्षा पूरा गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयबाटै रोजगारी र आयमूलक काम पनि सिकाइनेछ ।’
प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १७:४८